Farmaajo oo Ardayda Jaamacadaha kula hadlay Garoowe
GAROOWE, Puntland- Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta khudbad u jeediniyay ardayda wax kabarata jaamacdaha Puntland iyo qaar kamid ah shacabka ku dhaqan caasimadda Garoowe, ayaa sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo mustaqbalka dalka maadaama ay kordhayaan xarumaha waxbarashada.
Madaxweyne Farmaajo oo ardayda kula hadlay Hoolka Jaamacadda Bariga Afrika ee Garoowe ayaa yiri,“Rajada aan qabo waxa ay tahay ardayda waxbaratay oo aan aaminsanahay in ay aqoontooda wax ugu qaban karaan dalkooda, kuna horumarin karaan. Maxaa yeelay dhallinyaradeenna waxa ay ka yihiin bulshada in ka badan 70%, taasina waa rajo aad u weyn.“
Madaxweynaha ayaa xusay in ardayda Soomaaliyeed ay muujiyeen dadaal iyo sabur badan, una soo dhabar adaygeen duruufo waxbarasho oo aad u adag, haatanna looga baahanyahay in ay shaqada ka soo bilaabaan asaaska si ay khibrad iyo waayo aragnimo u yeeshaan.
Madaxweynaha ayaa ku dhiirrigaliyey dhallinyarada dalka in ay u tashadaan sidii dalkooda ay u dhisan lahaayeen, ugana shaqeyn lahaayeen nabadda iyo horumarka.
Isagoo sii hadlaya, wuxuu sheegay in xukuumadda uu hogaamiyo ay dadaal dheer ku bixin doonto sidii ay usoo celin lahayd kalsoonida shacabka taasoo uu xusay inay sabab u noqon doonto soo laabashada sumcadda shacabka Soomaaliyeed.
Farmaajo, ayaa hadalkiisa ku daray inay xiriirka maamul goboleedyada oo wanaagsanaada ay kaalin ka qaadan karaa soo celinta rajada shacabka.
Musuq-maasuqa ayuu aad uga hadlay, wuxuuna tilmaamay in ruuxii mas'uul ah cuna hantida shacabkaas oo cayn kasta leh cawaaqib xumo uu ku dambayn doono, isagoo sheegay in ka dowlad ahaan ku dedaali doonaan sidii looga hortagi lahaa in arrintaas.
Markii ay soo idlaatay munaasabaddaas ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo uu wehliyo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa ay soo kormeereen Isbitaalka Guud ee magaalada Garoowe iyaga oo warbixin ka dhageystay maamulka iyo dhakhaatiirta Isbitaalka.
Qoraalka Madaxtooyadda ayaa lagu sheegay in Camey uu fulinayo awaamiir laga...
​Madaxweynaha Jubbaland oo duleedka Kismayo Qado ugu sameeyay Wafdiga Ra'isal wasaaraha Somalia
Soomaliya 14.07.2017. 22:27
Duqa Muqdisho oo 'arin khaldan' ka sameeyay Shirka Garowe [XOG]
Soomaliya 06.05.2019. 12:59
Gudoomihii hore ee Baarlamaanka Puntland oo geeriyoodey
Puntland 20.04.2019. 10:15